နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒိန်းမတ် သံအမတ်ကြီးနှင့် သီရိလင်္ကာသံအမတ်ကြီးတို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒိန်းမတ် သံအမတ်ကြီးနှင့် သီရိလင်္ကာသံအမတ်ကြီးတို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒိန်းမတ် သံအမတ်ကြီးနှင့် သီရိလင်္ကာသံအမတ်ကြီးတို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: နိုဝငျဘာ 02, 2018 In: Appointment, State Counsellor, State Counsellor GalleryNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ် သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. John Nielsen အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ – ဒိန်းမတ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေး အမြင်ချင်း ဖလှယ်ကြသည်။
အလားတူ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သီရိလင်္ကာသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Nandimithra Ekanayake အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဒိနျးမတျ သံအမတျကွီးနှငျ့ သီရိလင်ျကာသံအမတျကွီးတို့အား သီးခွားစီလကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဒိနျးမတျ သံအမတျကွီး H.E.Mr. John Nielsen အား ယနမှေ့နျးလှဲ ၂ နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး၏ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ – ဒိနျးမတျ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေးကိစ်စရပျမြားကို ဆှေးနှေးအမွငျခငျြးဖလှယျကွသညျ။
အလားတူ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ သီရိလင်ျကာသံအမတျကွီး H.E.Mr. Nandimithra Ekanayake အား ယနမှေ့နျးလှဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနဈတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး၏ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ပိုမိုတိုးမွှငျ့နိုငျရေး ကိစ်စရပျမြားကို ဆှေးနှေးကွသညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုပ္ပါးတောင်ရေရှည်တည်တံ့ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး